AC Milan oo dooneysa laba ciyaarayahan oo kamid ah kooxda Liverpool | Radio Himilo
Home / Cayaaro / AC Milan oo dooneysa laba ciyaarayahan oo kamid ah kooxda Liverpool
AC Milan oo dooneysa laba ciyaarayahan oo kamid ah kooxda Liverpool
Posted by: Ahmed Haaddi December 8, 2018
Himilo FM – Labada ciyaaryahan ee Liverpool Divock Origi iyo Daniel Sturridge ayaa lagu soo waramayaa in ay diiradda u saaraan yihiin kooxda AC Milan.
Origi iyo Sturridge ayaa ku soo billowday kulankii ugu dambeeyay ee Premier League oo ay la ciyaareen Burnley, laakiin waxaa jira shaki ku saabsan mustaqbalka fog ee garoonka Anfield.
Sida laga soo xigtay wargeyska La Gazzetta dello Sport, Milan ayaa diiradda saareysa labada weeraryahan iyaga oo soo gabagabeynaya raadinta ay ugu jiraan weeraryahanka Los Angeles Galaxy Zlatan Ibrahimovic.
Origi ayaa u ciyaaray Liverbool xilli ciyaareedkaan markii ugu horreysay, inkastoo ciyaaryahanka reer Belgium uu ciyaaray 83 daqiiqo kulankii Premier League, islamarkaana uu dhaliyay goolkii guusha ee Merseyside derby tan iyo billowgii bishii December.
Sturridge oo uu qandaraaskiisa dhacayo xaggaagan ayaa 14 kulan u saftay horyaalka iyo Champions League xilli ciyaareedkan, laakiin xiddigga heerka caalami ee dalka England ayaa ku soo billowday afar kulan oo ka mid ah kulamadaasi.
Previous: 69 jir laga diiday in laga badalo da’da u qoran markii haweenku ku faquuqeen
Next: Kooxda Liverpool oo xiriir la sameysay Adrien Rabiot